Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2013
Jolay 2021 10 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Oktobra, 2013
Portiogaly : Fifidianana Manamarina Ny Tsy Fitokisan'ny Olona Ireo Antoko Politika
Paortiogaly13 Oktobra 2013
Tsy fahatongavana mifidy, vato maty, vato fotsy ary mpifaninana tsy miankina. Ireo no safidin'ny antsasa-maherin'ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany teo tany Portiogaly.
Mpampianatra Mitokona Ho Fiarovana Ny Teny Katalana Ao Amin'ny Vondro-Nosy Espaniola Baleara
Espaina13 Oktobra 2013
Manohitra ny lalàna vaovao momba ny fampianarana izay manolo ny fitenim-paritra Katalana any an-tsekoly amin'ny tenim-pirenena telo ny fihetsiketsehana sy fitokonana tsy voafetra ataon'ireo mpampianatra eny an-dalambe.
Tafatafa Niarahana Tamin'ilay Tompon-dakan'ny Ady Totohondry Tao Ginea Lasa Belza Mpanao Politika
Afrika Mainty12 Oktobra 2013
Tsy moramora mihitsy ny fampivadiana ny tontolon'ny fanatanjahantena avo lenta sy ny poliika. Mbola sarotra kokoa noho izany rehefa firenena roa samy hafa no voakasika. Manazava ny zotrany mendrika ho deraina i Bea Diallo.
90 % -n'i Madagasikara No Tsy Mandray Afa-tsy 2 Dolara Isanandro. Fa Nahoana?
Afrika Mainty11 Oktobra 2013
Ity fizarana ity dia hiresaka ny fitontonganan'ny fiainana sosialy sy ara-toekaren'i Madagasikara ary ireo vahaolana tokony hosaintsainina.
Inona No Azon'i Singapore Ianarana Avy Ao Myanmar
Azia Atsinanana10 Oktobra 2013
Nilaza ilay olo-malazan'i Demokrasia Suu Kyi fa afaka hianaran'i Singapore ny fomba fiainana milamina sy fifandraisana mafana kokoa sy akaiky ao Myanmar'.
Zaza iray Amin'ny Telo Maneran-tany No Tsy Manana Soram-piankohonana
Ny tsy fisian'ny kopia nahaterahana dia mety midika fa ny zaza dia tsy afaka hisoratra anarana any an-tsekoly na mahazo fitsaboana. Tafatafa niaraka tamin'i Evelina Martelli, lehibe mpitantana ny BRAVO!, tetikasa mamporisika ny fanaovana kopia nahaterahana.
Namotsotra Gadra Politika i Iran
Tselatra · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Oktobra 2013
Namotsotra gadra politika maro i Iran tamin'ny Alarobia, isan'izany ilay Iraniana, Nasrin Sotoudeh, mafana fo amin'ny zon'olombelona, mpahay lalàna sy nahazo ny Sakharov Prize. Nanoratra ny vadin'i Nasrin “Tonga i Nasrin,…hoy zareo hoe afaka ianao.”
Azia Atsimo09 Oktobra 2013
14 km fotsiny miala an'ireo Sundarbans, ilay alanà honko lehibe indrindra eran-tany sady toerana isan'ireo Lovan'izao Tontolo Izao arovan'ny UNESCO, io tobin'herinaratra mandeha amin'ny arintany kasaina hatao io.
Tokony Hosazian'i Brunei Ve Ireo Nahazo Vatsim-pianarana ‘Nandositra’?
Azia Atsinanana08 Oktobra 2013
Manenjika ireo mpianatra mpikaroka nahavita fianarana any ivelany kanefa tsy nody an-tanindrazana ny governemanta Brunei. Niteraka adihevitra momba ny vatsim-pianarana ao amin'ny firenena izany olana izany.